Qaybta 1.How waxaan ka dhigi karaa orod iPhone aan si degdeg ah?
Qaybta 2.One guji si aad iPhone dhaqso
Qaybta 3. 10 Talooyin weyn si aad iPhone dhaqso
Qaybta 1. Sidee u samayn karaa orod iPhone aan si degdeg ah?
Maalmahan si dad badan oo u hantidaan iPhone. Iyo, iyaga oo aan haysan iPhone oo keliya si ay u muujiyaan off; ay ka heli kuwan casriga ah gaar ahaan aad u faa'iido badan. Waxaan u isticmaali telefoonada naga muddo ku dhow wax walba; ka la xiriiraya kuwa jecel inay biilasha ku bixiso. Taasi waa sababta cayayaanka ama Dicumintiyo wuxuu ahaan karaa mid aad looga xumaado oo aan loo dulqaadan karin. Ka dib adiga oo isticmaaleya isticmaale iPhone in muddo ah, waa si buuxda u caadi ah in uu bilaabo 'shaqo gaba'. Haddii aad dareersan tahay sida aad iPhone waxaa socda gaabis ah, in macnihiisu waxa weeye dhibaato gaar ah. Laakiin, nasiib wanaag, dhibaato in si fudud loo xallin karaa.
Waxaad samayn kartaa si aad iPhone dhakhso iyadoo la tirtirayo aad sawiro iyo videos jir ordi. Files Kuwani waxay qaadan kartaa ilaa badan oo boos oo aad telefoonka gaabis ah. Nadiifinta aad Safari taariikhda, khasnado iyo cookies sidoo kale kaa caawin kartaa telefoonka ordi macaan. Geedi socodka soo jeeda Automatic si weyn aad iPhone hakin kartaa. Taasi waa sababta aad hadda ka dibna wax dilaan waa in iyaga kasta.
Tallaabooyinkan waxay sida caadiga ah qaadato xoogaa waqti ah. Waxaad si aad u ogaato fursadaha in goobaha aad u tirtiro goobaha Safari ama dilka geedi socodka soo jeeda. Oo saamigii ka mid ah dadka aan rabin inay tirtirto sawiro iyo videos, iyagoo aan loo eegin sida jir ay yihiin. Haddii aad tahay mid ka mid ah dadkaas, markaas waxaad ahaan doontaa dhab ah la yaabay markii aan kuu sheego software ah in ka dhigi doonaa iPhone dhaqso ka mid ah. Qaybta ugu fiican yahay, uma baahnid inaad tirtirto wax iyo qalab aad noqon doonaa dhakhso dib hal click.
Qaybta 2. Mid ka mid ah click si aad iPhone dhaqso
5.148.014 oo qof ayaa u soo bixi
Halkan waa tutorial sahlan ku saabsan sida loo isticmaali SafeEraser Wondershare 1-Guji doorasho Nadiifinta.
1. Daahfurka Wondershare SafeEraser oo guji 1-Guji Nadiifinta oo kor ku tusi doonaa marka aad arjiga furo.
2. Marka aad sidaas samayso, codsiga bilaabi doonaa baar qalab aad si toos ah.
3. Kadib markii geedi socodka scan la dhammeeyo, meel in files junk haystaan ​​lagu soo bandhigi doonaa. Guji "nadiifinta" oo bilaash ah ilaa aad iPhone ee bannaan.
4. Qalabka waa in la xiran your computer oo dhan nidaamka oo dhan si aad u yeelan karto khibrad nadiifinta fiicnayn.
5. Marka nadiifinta la dhammeeyo daaqad la mid ah mid ka mid ah kuwan soo socda ay muujiyaan doonaa.
Iyo, in ay tahay! Iyadoo hal click, oo dhan files junk ayaa lagu qaadayey, oo ku yaalla oo la tirtiro.
Wixii qaab iPhone ka sii fiican, hubi talooyinka soo socda ee lagu sameynayo aad iPhone dhakhso.
Aan ay wajahayaan. Idinkuna ma waxaad eegi aad sawiro, in la geeyay sano, maalin walba. Kala beddelashada photos aan loo baahnayn (iyo faylasha kale) si aad u computer, oo markaas iyaga la tirtiro waa mid ka mid ah ugu wanaagsan ee ahaa in la dadajiyo telefoonka.
2. Delete Apps aan loo baahnayn
Waa maxay qaadataa ilaa meel ka sii photos jir ka badan yihiin barnaamijyadooda weyn in aadan mar dambe u isticmaalaan. In badan oo Chine aad leedahay, gaabis ah aad iPhone yahay. Waxaad arki kartaa ilaa inta boos app hal degan oo ag maraya in Settings> General> Isticmaalka.
3. Delete Old Message Text Taxaneyaal
Inkasta oo aad yaabaa in aadan fariimaha qoraalka wax aan soo qaato oo badan oo aad meel iPhone ee, runta waa hab oo kala duwan. Sida ay soo baxday, fariimaha qoraalka ah oo macno ahaan miisaami kara hoos u software aad telefoonka ee. Si aad sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah aad iPhone, waa in aad sidoo kale tirtirto qaar ka mid ah threads fariin hore.
4. masixi Safari ee Cache
Haddii aad tahay user computer ah, markaas u badan tahay in aad tirtirto biraawsarkaaga ee khasnado, taariikhda iyo cookies, sax? Waa hagaag, iPhone waa computer ah mini oo waxaad ula dhaqmi waa in si la mid ah. Taas macnaheedu waa in aad u baahan tahay si ay u masixi aad Safari ee khasnado hadda kasta oo markaas. Tag Settings> Safari> Clear History. Waa in aad xulan Kukiyada oo cad iyo Data, iyo sidoo kale waxaad tirtiri kartaa xogta kale sida taariikhda browser aad.
5. Demi Auto App Updates
Waxaad ma laga yaabaa in xataa taas ay ogaadaan, laakiin jidaynayey aad iPhone in update auto-ada aad hoos runtii gaabin karin iPhone. Mararka qaarkood, sababta aad iPhone waxaa xoogaa gaabis socda waa sababtoo ah waxa ay u badan tahay waxa ay isku dayaysaa in ay cusboonaysiiso Chine ee asalka ah inta aad wax kale oo ay qabanayaan. Si aad u dami habkaani u gudubnee Settings> Lugood & App Store> Automatic Downloads. Demi sliders in ay iska meesha uu ku leeyahay updates. Haddii aad ka welwelsan tahay in aad haysan doonaa ugu dambeeyay, versions updated ee Chine aad, ha ka welwelin. Waxaad iyaga gacanta u cusbooneysiin karaa mar kasta oo update ah waxaa laga heli karaa.
6. Off Automatic Downloads
Sida updates si toos ah, downloads si toos ah ay yarayn karto waxqabadka aad iPhone. Si aad u dami madaxa habkaani badan si Settings> Lugood & App Store> Automatic Downloads iyo beddelaan sliders in ay off.
7. Close All Apps Orodka ee asalka ah
Your telefoonka laga yaabaa in cajiib gaabis ah mararka qaar, sababtoo ah wax badan oo Chine ayaa la socda ee asalka ah. Si aad u phone ordi macaan, xiro dhammaan barnaamijyadooda la ordaya ee asalka ah.
8. Haddii Wax karo Gacanta qabtay, Gacanta Ma Waxa
Kasta oo feature si toos ah, sida updates hore u soo sheegnay auto, auto downloads, iyo xitaa indha indheynaya shabakadaha Wi-Fi dhow hoos si weyn u dhigi kartaa telefoonka. Sidaa darteed, demi dhammaan sifooyinka automatic off, aad iPhone.
9. Guuleysatey aad iPhone
Waa wax wanaagsan in guuleysatey aad iPhone kasta oo mar mar ayey. Habkan, aad hoos u xidhay doonaa qaar ka mid ah ilaha ugu badan tahay in ay yihiin haysta gal software aad iPhone iyo waxa ay culays ku ah.
CUSBOONAYSIINTA telefoonka qaadan kartaa ilaa meel ka mid ah, laakiin waa muhiim. Software updates sida caadiga ah waxaa ka mid ah la rajeenayo in cayayaanka oo hagaajin kartaa qaar ka mid ah arrimaha aad iPhone ee.
> Resource > iPhone > Talo si aad iPhone si dhakhso ah (ay ka mid yihiin iPhone 4 / 4s / 5 / 5s / 6/6 Plus)